» सरकार अल्पमतमा परेपछि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य
संसदले कानुनसँगै जनसरोकारका विषयलाई ठाउँ दिन्छ भनेर स्थापित गर्ने अवसर गुम्यो’
२६ पुष २०७७, आईतवार २०:०६
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको सातौं (हिउँदे) अधिवेशन अन्त्य भएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले त्यसको १२ दिनपछि पुस १७ गते राष्ट्रिय सभाको बैठक किन बोलायो ? फेरि, अधिवेशन सुरु भएको १० दिनमै किन अन्त्य गर्यो ? यसका पछाडि के कस्ता कारण छन् ? भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।
तथ्यहरुले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउनु बाध्यात्मक रहेको देखाउँछ भने हठात अन्त्य गर्नुको अन्तर्य सरकार अल्पमतमा रहेको दर्शाउँछ ।
बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, राष्ट्रिय सभा विघटन हुनै नसक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय–समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्न्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गत असार १८ गते वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । ठीक ६ महिना पुगेको दिन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो । यो संवैधानिक संकट टार्न सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाएकी थिइन् । यो बाध्यात्मक थियो । यहि बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठक जम्मा १० दिनमा चार वटा बैठक बसेर सकिएको छ ।
‘एउटा विधेयक फिर्ता लिन नसक्ने संसद केलाई चाहियो !’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको अवस्थामा हुँदा नेकपा ओली समूह राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा छ ।
आफू अल्पमतमा हुँदा त्यसबाट फाइदा लिन नसक्ने भएपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको तत्थ्यहरुले देखाउँछ ।
तर, सातौं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभालाई एउटा यस्तो अवसर थियो, जहाँ प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ । लामो समय पनि संसद सुरु भएको, जनसरोकारका धेरै विषय थिए ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले समेत आइतबारको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग बिजनेश नभएकै कारण अधिवेशन अन्त्य भएको बताएका छन् । तर, सरकार र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेजस्तो ठ्याक्कै होइन । बरु विगतमा राष्ट्रिय सभाको कामले प्राथमिकता पाउन सकेन भन्ने गुनासो चिर्ने गरी आफ्नो उपस्थिति देखाउने एक महत्वपूर्ण अवसर थियो ।
अन्तिम दिन आइतबार कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक कक्षमा प्रवेश गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरे । ‘बैठकमा बसेर अधिवेशन अन्त्यको कार्यसूची सच्याइयोस् भनेर विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्ने वा विरोधका अन्य तरिकाहरु हुन सक्थे किन बहिष्कार नै गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद वेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘उनी (प्रधानमन्त्री)को कुरा सुनेर किन बस्ने ? बस्दै नबसी विरोध गरौं भन्ने हामीलाई लाग्यो त्यसकारण बाहिरिएका हौं ।’ onlinekhabar